Ny antsipirian'ny fikojakojana sy fikojakojana ny welder cage
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-04-20
Fanontaniana 1: Ahoana no ahafahantsika mampihena ny akanjo anaovan'ny tranom-borona? 1. Ara-dalàna ireo mpanamboatra milina fantsom-boaloboka mitafy faritra mandritra ny fampiasana. Mba hampihenana ny fiakanjoana eo anelanelan'ny ampahany, dia tokony hifantoka amin'ny antsipiriany isika mba hahafahana manao ny fanatanterahana ny milina fantsom-boaloboka, sy ny mpiasa ...
Ampiasao indray ny kitapo plastika: misafidiana harona plastika matanjaka vitsivitsy ary ento mivezivezy ao anaty kitapo ahafahanao miantsena amin'ny kitaponao manokana fa tsy entin'ny magazay. Mora entina ny kitapo plastika azo ampiasaina (mety anaty kitapo kely na paosy aza!), Ary raha mbola mitondra vitsivitsy hafa ianao dia afaka mividy lo ...
Fomba fanaovana Hook sy buckle
Sehatra teknika: ny zavatra noforonina dia mifandraika amina hook-and-loop mampifandray faritra roa farafahakeliny, toy ny fiadiana amin'ny mpikambana eo alohany. Background: Ny hook-and-buckle dia karazana tady, fehy, ary faritra hafa izay natao ho azo avela hampiasaina amin'ny fampiharana maro samihafa. Ny clasp dia ini ...
Fako vita amin'ny vera
FRP dia fitaovana fitambaran'ny polymer (anglisy: Fiberglass Reinforcde Plastics na FRP). Ny kaontenera fanangonana fako vita amin'ity fitaovana ity dia fitoeram-pako fiberglass. Ny fitaovana FRP dia nampiasaina tamin'ny fiarovana nasionaly, aerospace, fiaramanidina ary sehatra hafa. Miaraka amin'ny fandrosoan'ny siansa sy ny ...
Fahalalana momba ny kitapo Skip
Kitapo mihodina, araka ny anarany, dia kitapo fako. Kitapo kely dia mitondra fampiononana lehibe ho an'ny tokantrano an'arivony. Izy io koa dia manome antoka lehibe ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana ary koa manamora ny fanodinana sy fanasokajiana ny fako. Ny kitapo fako dia vita amin'ny plastika matetika, fa ny plastika ...
Ny tanjon'i Meijer dia ny “any ankoatry ny kitapo” ary hampihena ny fako plastika
Meijer dia niara-niasa tamin'ny mpivarotra sakafo sy zava-mahadomelina hafa, niditra tao amin'ny alliance ho mpiara-miasa mpanampy ary namorona indray ny kitapo fivarotana mba hanampiana hampihena ny fako plastika. Ny fifanekena dia natomboka tamin'ny fahavaratra mba hitsapana ny safidy momba ny kitapo plastika azo ampiasaina ankehitriny ampiasain'ny mpivarotra lehibe manerana ny firenena ....
Kitapo fanarian-tsakafo Baote Asbestos—- Fitsaboana fako asbestos
Fanamboarana kitapo asbestos - Vidio ny kitaponao fako asbestos amin'ny vidin'ny fifaninanana ao Baote. Ny vokatray rehetra amin'ny stock dia hatolotra anao haingana. Tsy vitan'ny manatitra ny kitaponao asbestos manerana an'i Eropa izahay, fa mbola lavitra koa. Ho fanampin'ny kitapo fanesorana asbestos, izahay koa ...
Ny Masinina Peeling Peeling Professional - zx-dl1
Nahomby izahay tamin'ny fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny agrimachinaly Italiana hivarotra ireo peelers malalaka antsika any Eropa ihany. Ny mpamaky voanjo malalaka dia mampiasa teknolojia patanty ary ...
Fampivoarana ara-tantara sy fitandremana ny milina fanaovana fantsona
Vokatra vita amin'ny fantsom-pohy simenitra ny vokatra lehibe dia ny fitaovana fanaovana fantsom-pamokarana radial vertika, fitaovana hovitrovitra manaparitaka toerana tokana sy avo roa heny, fitaovana hovitrovitra avy any an-tselatra mihombo, milina vy mihodina mandeha ho azy, milina fantsom-by, milina fantsom-pifandraisana, ...
Seho ara-teknika sy fitandremana
Ny fitsipiky ny fiasan'ny milina fantsom-pitrandrahana simenitra radial vertika dia toy izao manaraka izao: mampiasa ny fihodinan'ny rotaky ny vatan'ny milina fantsom-panafody, mamoaka ny simenitra maina maina amin'ny alàlan'ny lohan'ny fantsom-panafody mba hamokarana fantsom-bozaka simenitra sy fantsom-bozaka vita amin'ny simenitra amin'ny fomba famoronana manaraka ...
Ny fizotran'ny fanaovana fantsom-panafody radial mitsangana
Ny fizotran'ny fantsom-panafody radial mitsangana dia iray amin'ireo fizotran'ny fanodinana fantsom-pitrandrahana vita amin'ny beton sy fanamafisana, izay mamokatra fantsona kely savaivony kely misy savaivony 300 - 1200. Ny tombony lehibe azony dia ny hafainganam-pamokarana haingana dia haingana, ny vokatra dia .. .
BAOTE CONCRETE PUMP WASHOUT BAG ---- NY FANOMPOANA FIVORIANA FIVORIANA TAMIN'NY TONTOLO IZAO TONTOLO IZAO! Inona ilay kitapo fanasana Concrete? ---- Ny Concrete Washout Bag dia manome vahaolana haingana sy mora hifehezana ny fako fanariana beton rehetra. Napetraka eo ambanin'ny ...
Hex Bolts, Bolts amin'ny kalesy, U Bolts, Lag Bolts, Masinina Sodina Pipe, Bolt firafitra,